အရပ်ချင်းတူသူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အားသာချက် (၉) ခု
ဒါတွေကိုသာ ပြောလိုက်ရင် သူများတွေတောင် မနာလိုဖြစ်ကုန်မယ်....
မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ထက်အရပ်ရှည်တဲ့ယောက်ျားလေးကို ချစ်ချင်ကြတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကျတော့လည်း ကိုယ်နဲ့ အရပ်ချင်းတန်းတူဖြစ်နေမယ့် မိန်းကလေးထက် ကိုယ့်ထက်ပိုပုမယ့် ကောင်မလေးကိုမှ ချစ်ချင်ကြတာမျိုး။ ကိုယ်နဲ့ အရပ်အမောင်းချင်းတူနေတဲ့လူကို ဘာကြောင့်မချစ်ချင်ရတာလဲ? ချစ်သူနဲ့ကိုယ်က အရပ်ချင်းတူနေရင် ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်။
၁။ ချစ်သူနှစ်ဦး အနမ်းခြွေတဲ့အခါ အရပ်ချင်းတူနေတာ ပိုမကောင်းဘူးလား? သက်တောင့်သက်သာနဲ့ နှစ်နှစ်ကာကာ နမ်းလို့ရမယ်လေ။ ခေါင်းငုံ့စရာလည်းမလို၊ ခြေဖျားထောက်စရာလည်းမလိုဘူး။
၂။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ရှိလှတယ်။ ပခုံးချင်းဖက်မလား၊ လက်ချင်းတွဲမလား အားလုံးအေးဆေး။ အရပ်ချင်းတူနေတော့ ဘယ်လောက်များ သက်တောင့်သက်သာရှိလိုက်သလဲဆိုတာ အရပ်ချင်းတူတဲ့စုံတွဲတွေကို မေးကြည့်ပါ။
၃။ ပုတယ်၊ ရှည်တယ်လို့ ငြင်းခုန်နေစရာမလိုဘူး။ နှစ်ယောက်လုံးက တန်းတူတွေပဲ။
၄။ အဝတ်အစားတွေဆိုလည်း လဲဝတ်လို့ရတယ်။ လဲဝတ်လို့ရတယ်ဆိုတာထက် ယောက်ျားဝတ်ရှပ်အကျႌနဲ့ တီရှပ်တွေက မိန်းကလေးဝတ်လို့ပါ ရနေတာလေ။ ပခုံးလေးနည်းနည်းကျယ်ချင်ကျယ်လိမ့်မယ် သိပ်တော့မသိသာဘူး။
၅။ အတူတူနေတဲ့လူတွေဆိုရင် ရေချိုးခန်း အတူသုံးလို့ရတယ်။ ရေပန်းက နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အရပ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေမှာကိုး။ တစ်ယောက်ကအရပ်ရှည်၊ တစ်ယောက်က ပုနေရင် ရေပန်းတစ်ခုတည်းကို တပြိုင်နက်တည်း နှစ်ယောက်အတူသုံးလို့မရဘူးလေ။
၆။ ခုလိုမိုးရွာနေချိန်ဆိုရင် ပိုသိသာတယ်။ ထီးတစ်ချောင်းကို နှစ်ယောက်အတူဆောင်းတဲ့အခါမှာပေါ့။ သူ့အရပ်ကရှည်တော့ ထီးကိုမြှောက်ထားရင် ကိုယ်ကမိုးစိုတယ်၊ ကိုယ့်ကို မိုးလုံအောင်ထီးမိုးပေးတော့ သူကစိုရော။ ဒီလိုပြဿနာမျိုးက အရပ်ချင်းတူနေတဲ့စုံတွဲတွေမှာ မရှိဘူးနော်။
၇။ မတ်တပ်ရပ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ ထိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်စေ တစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကို တစ်ယောက်က သေသေချာချာ ကြည့်နိုင် မြင်နိုင်တာလည်း ကောင်းတာပဲ။
၈။ မိန်းကလေးဘက်က အားသာရတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ ဒေါက်ဖိနပ်စီးစရာမလိုတဲ့အချက်ပဲ။ သူ့အရပ်ကြီးက အရမ်းရှည်နေုလို့ ကိုယ့်မှာ သူနဲ့အရပ်ချင်းညီအောင် ဖိနပ်အမြင့်တွေပဲ စီးနေရတာ မမိုက်ဘူးလေ။
၉။ ဒီလိုအားသာချက်တွေကပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကို ပိုပြီးရင်းနှီးမှုရစေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တူညီနေတဲ့ အနေအထားတစ်ခုမှာ လူနှစ်ယောက်အတူရှိနေခြင်းဟာ အားလုံးထက် ပိုပြီးရင်းနှီးမှုရစေပါတယ်။